Faallada awdalpress ee maanta: Gebileynews.net ma isku dir ayey bisha barakaysan bilaabeen! « CEELBARDAALENEWS.COM
« War aan gun lahyn oo daandaansi ah oo kasocda Gabilay nala akhrista
Qabanqaabada Shir Arrimaha Somalia Ah iyo Qorshaha Lala Damacsanyahay Somaliland »
Faallada awdalpress ee maanta: Gebileynews.net ma isku dir ayey bisha barakaysan bilaabeen!
Awdalpress-London-Maalintii Khamiistii, 26 Aug. 2010, waxa shabakadda gebileynews.net boggeeda hore ku soo baxay faallo dad badani ka biyo diideen oo loogu magacdaray: BADHEEDHAHA GABILEYNEWS: laab lakaca Somaliweyn ee ka curtay Awdal xaguu saldhigan doonaa!, faalladaasi oo sida muuqata ay farriinteedu ahayd in la faquuqo amma la colleysto dadka reer Awdal ee laf-dhabarta u ah Somaliland, haddii ay ahaan lahayd, nabadda, wada jirka, horumarka iyo talada dalkaba. Waxanan la yaabnay ololaha ku kiciyey in tifaftiraha shabakaddaasi bulshada walaalaha ah ee ay isku ujeeddada yihiin u kala gudbiyaan warar aan sal iyo raadtoona lahayn, si ay fidmo iyo shaki u kala dhex geliyaan… oo xataa ay ka xishoon waayaan waxyaabaha qaran dumiska ah.
Bulsho ahaan waa mid caadiya in laba degaan, gobol amma beelood oo daris ahi ay had iyo jeer tartamaan isla markaana ay xafiiltamaan, kaftamaan, doodaan, mormaan ammaba ay wakhtiyada qaar isku dhacaan ( inkasta oo aan loo baahnayn). Laakiin sannadahanba waxa bulshada reer gebilay qaarkood ka muuqata xummad iyo xasaasiyad ay ka qabaan shacabka reer Awdal ee ay walaalaha yihiin. Taasi oo mishiinkoodu yahay shabakadaha qaar iyo siyaasiyiinta qaar.
Sida aan ka warqabnana waxa ay xumaantaasi keentay in ay degaanka Kala-Baydh, budhcad reer Gebilay ahi ka fuliyaan falkii xumaa ee dadka lagu qalay ee haadka loo wadhay. Falkaa foosha xumaa ee helbahooda lagu googooyey dad masaafur ahaa oo aan waxba galabsan. Ayaan illaa iyo immika la hayn dadkii falkaa ka dambeeyey, sharciga oo la hor keenana ha sheegin, waxana la og yahay in ay dambiilayaashaasi weli degaanka ku dhuumaalaysanayaan. Dawladdii markaa jirtayna way ku ceebowday wax ka qabadka falkaasi. Iyadoo arrintu u muuqatay sidii murtidii ahayd baadida nin baa kula deydeyi, daalla kaa badin…
Taasi oo dhiiggeedii aanay illaa immika reer Gebilay qaar ka mid ahi aanay ka faraxalan…..Iska daa Tala laga galee… Waxana dhiillooyinka loo tirinayo reer Gebiley ugu dambeysey falkii lagu dilay ina Cashuur Raage ( Sh. Muxumad Raage ayaa adeer u ahaa ), oo ku magac dheeraa Girrise, oo sida la sheegay la dilay isaga oo wata koox budh cad ah oo xoolo dhac u socotay.
Laakiin waxa Borama laga soo sheegay in aanu Madaxweyne Siilaanyo maqli karin falal dambiyeedka ay budhcadda Gebilay ka wadaan jiidahaasi, waxanu amar ku bixiyey in la soo qabto wax alla wixii dhib ku haya dadka. Taasina waxa ka markhaati ah sida ay ciidankiisa qaranku ay dhawaan u qabteen 400 oo adhi ah ee ay budhcaddaasi Gebiley dhawaan ka boobeen reero jiiddaasi deganaa. Dhibta ay budhcaddaasi dadka ku haysaana kuma koobna Ceelbardaale iyo Gebilay oo kaliya ee waa illaa Hargeysa duleedkeeda. Dadkuna waa ka warqabaan.
Sheekadan shabakadda gebiley.net ku qorraa waxa ay iyana Awdal ku shaabadaynayeen…. ( malaha waa sida ay jecel yihiine )….in ay u heellan yihiin Somaliweyn, waxana ay soo qaateen, xildhibaanno la sheegay in ay Borama yimaaddeen. Laakiin may sheegin xildhibaannadaasi iyo kuwo kale oo Burco, Hargeysa iyo meela kaleba u soo cararay, sida ay xaaladdooda runta ahi tahay.
Haddii aan wax yar uga iftiimiyana, waxa laga warqabaa in ay Muqdishada ay xildhibaannadaasi ka yimaaddeen ay ololayso, xildhibaanno iyo dadka kale ee joogaana aanay caafimaad qabin, sidaasi daraaddeed ay soo taabteen hammigoodii ahaa Somaliweyn.
Shakhsiyaadkaasi ay tilmaameenna way yimaaddeed waxana loo baahnaa in la dejiyo, la nasiyo oo la warsado, waxase nasiib darro ah oo aan maqallay in la xidhay, taasina waa mid ka fog bani’aadamnimada iyo in aan isku naxariisanno. Waxanan shabakad ahaan ku baaqaynaa in xorriyaddooda la siiyo, oo weliba la dhaqaalyeeyo, mar haddii ay soo guryo hooydeen.
Laakiin shabakadda Gebiley.net, waxa ay xariifnimadeeda doonaysaa in ay si kale ugaga faa’iidaysato, oo ay ka dhigto niman dalka kala goynaya oo aan oggolayn Somaliland, kaddibna ay Awdal oo dhan ku shaabadayso in caasimaddii Somaliyaba loo soo rarayo Borama…..saaxiibbayaal, Somaliland ma joogto meel loo baqo….shikiga aad dawladda cusub gelinaysaanna kaga heli maysaan in la idiin arko wakiilka laga dhageysto galbeedka Somaliland…waana la is bartay, dawladda Siilaanyana maaha mid sidii tii hore indha la’. Madaxweyne Siilaanyo iyo dawladdiisuna meesha ay maanta ugu sumcad badan tahay waa Awdal….reer Awdalla waa dad u bislaaday siyaasadda, wixii tabasho ah ee ay qabaanna way heli doonaan, laakiin maaha shacab duminaya nabaddii ay gacmahooda ku dhiseen iyo hoggaamintii ay sharafta ku khatimeen.
AWDAL TOL COUNCIL
Gebliey.net waxa ay ka hadashay ururka magaciisu kor ku qoran yahay oo dhawaan lagu aasaasay North America, laakiin Somalidu waxa ay ku maah maahdaa … Si xun u sheeg sixir ka daran…Haddaba haddii aan wax yar ka taabanno ururka inta aan ka ognahay ee runtiisu tahay iyo weliba faa’iidadiisa iyo saamaynta uu ku yeelanayo Somaliland.
Ururkan waxa la aasaasay bilowgii sannadkan 2010, waxana mufakiriinta ururkani daraasado badan ka sameeyeen, sida loo beddeli karo hab-maamulka bulsho, ee weli ku salaysan qabaliga, loogana dhigi lahaa mid casri ah. Waxana ay aad uga fogaadeen siyaasadda dawladnimo ee ka jirta Somalia iyo Somaliland, fikirkoodana waxa ay ku saleeyeen illaa imika qaabka bulsho ee ay dadka reer Awdal iyo Gebiley ay u nool yihiin amma ay qarniyo u soo noolaayeen.
Shirkoodii labaad oo ka dhacay Kanadana waxa ay ku doorteen 30 aqoon yahan, oo dhammaantood la yaqaanno, una xaytay in ay mooshinkaa loo ururay ka midho dhaliyaan. Arrintana waxa ay u kala dhigeen ta wakhtiga fog iyo ta wakhtiga dhow. Sheekaduna waa mid daraasaddeedu socoto, oo ay bilaabeen qoraalladii iyo fikir ururintii. Wakhti wax laga sheegana ma joogaan. Shaabad Somaliweyn oo ay wataanna ma jirto. Laakiin shakhsi amma shakhsiyaad ka mid ahi way wadan karaan fikir siyaasadeed, diimeed, amma dadnimo oo ka gaar ah kuwa kale. Taasina qofku xor ayuu u yahay mabdi’iisa, khasabna maaha in fikirka qofka u gaarka ah lagu baacsado ama talada loogu diido.Balse waxan ognahay in aanay ururka saldhig u ahayn diin, siyaasad iyo wax kale.
Sidaasi daraaddeed, waxa aan akhristayaasha iyo gebiley.netba u sheegeynaa in aanu ururkaasi ahayn mid khammaarka ay ciyaarayaan soo geli kara. In la tashado, oo ay qabiil amma gobol u tashadaana waa mid xilliyadan caadi noqotay, oo cidna marti loogama aha.
Waxan hadalka ku soo khatimayaa, oo aan gebileynews.net u sheegaynaa in ay ka fogaato isku dirka dadka walaalaha ah iyo shakiga aad dadka kala dhex dhigaysaan bilaha ramadaan. Kana toobadkeentaan.
This entry was posted on August 27, 2010 at 2:58 am	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.